Taariikhda ilaha dhaqaale ee Jubaland , Dowlada Jubaland ee hada Curatay Marxaladahii ay soo martay( Warbixin Cilmiyeed Muhiim ah oo xiiso leh ka bogo (By Enjineer Tiyeeklow) | waamonews	Home
Friday, October 11th, 2013 | Posted by editor Taariikhda ilaha dhaqaale ee Jubaland , Dowlada Jubaland ee hada Curatay Marxaladahii ay soo martay( Warbixin Cilmiyeed Muhiim ah oo xiiso leh ka bogo (By Enjineer Tiyeeklow)
Dawlad Goboleedka Jubbaland
Dawlad Goboleedka Jubbaland wuxuu ka mid ayahy Dawlad Goboleedyada Jamhuuriyada Federalka Soomaaliya. Dadkeedu waxay isugu jiraan beeraley, kaluumaysato iyo xoola dhaqato oo ku dhaqan koonfurta Soomaaliya.
Waxaa dhidibada loo-aasay 2013, waxaana as-aasay waxgarad ka kooban odayaal dhaqameedyo, ganacsato, culumaa’udiin, siyaasiin, haween, ka soo kala jeeda sadex Gobol ee laysku yidhaahdo Jubbaland State. Dadka ugu caansaan ee isugu yimid shirkii ka dhacay kismaayo ee lagu dhisay Dawlad Gobaleedka Jubbaland waxaa ka mid ahaa Madaxweeynii Maamulka Azaania Prof Gaandhi, Reysulwasaarihii hore ee Dawladii ku meel gaadhka Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo qaar kaloo badan.
Dhismaha Dawlad Goboleedka
Dowlad Goboleedka Jubbaland waxa uu ka kooban yahay sadex waaxood oo dowli ah oo kala ah, Madaxweeyne iyo Madexweeyne ku xigeen, Golaha Baarlamaanka, Golaha Wasiirada, iyo Garsoor.
Sheekh Axmed Maxammed Islaam waxaa lagu doortay shirweyne ay isugu yimaadeen ergooyin 500 oo qof, 23/02 ilaa 15/05/2013 lagana soo xulay dhamaan Gobolada Jubbooyinka, Dawlada Federalka waxay Aqoonsatay 29 August 2013. Mudada xilku waa 2 Sano, dhamaadka mudada Xilka, wuxuu xaq u leeyahay in uu dib u tartami karo. Madaxwaynaha ayaa ah awooda ugu saraysa dowlada, ahna Taliyaha ciidamada qalabka sida, astaana waxa uu u yahay midnimada Jubbaland. Madaxweeyne Ku Xigeenada
Janaral Ismaaciil Farataag waa kaaliyaha Madaxwaynaha sidii uu gudan lahaa xilkiisa, Waana sii-hayayaasha marka uu maqan yahay Xilka madaxwaynaha.
Golaha wasiirada waxay ka koobnaan doonaan 10 wasiir, waxaa magacaabaya Madaxwaynaha isaga oo la tashanaya Madaxwayne Ku-xigeenka, wasiiradu waxay kala taliyaan Madaxwaynaha dhanka hawlgalada, isla markaana masuul ka yihiin xiriirka golaha Baarlamaanka dhinaca siyaasada dowlada iyo Adeega.
Maamulka dowlada wuxuu qabtaa shaqooyin kala duwan, waxaana madax ka ah qayb kasta wasiir, masuulna ka yahay xiriirka golaha baarlamaanka ee wasaaradiisa. Shaqaalaha wasaarada waa xirfadlayaal shaqadoodu aysan ku xidhnayn isbadelka dawlada
Shaqada Maamulka dowlada waxaa fuliya qaybo kala duwan, qayb kasta waxaa madax u ah Wasiir, wuxuuna ka masuul yahay xiriirka golaha wakiilada ee wasaaradiisa. Shaqaalaha wasaaradu waa xirfadlayaal ayasan shaqadoodu ku xirayn isbedel ka dowlada.
Awooda xeer dejinta waxaa leh Golaha Baarlamaanka, wuxuu ka koobnaan doonaa 60 xildhibaan wakiilna ka ah dhamaan gobolada Jubbaland, Golaha Baarlamaanka waxay dhexdooda ka dooranayaan Afhayeen iyo labo ku-xigeen.
Afhayeenka waxa uu maamulayaa kal fadhiga golaha isla markaana hubiyaa tixraaca dastuurka, ku xigeenadu waxay kala shaqeeyaan afhayeenka gudashada xilkiisa, Golaha baarlamaanka waxaa ka mid noqanaya gudiyo daba gal ku sameya xukuumadu sida ay u fuliso Adeega bulshada.
Xukuumada iyo Golaha baarlamaan waxaa ka madax banaan Garsoorka, qaybaha uu ka kooban yahay waa (a) Maxkamada sare (b) Maxkamada Rafcaanka, (c) Maxkamada Darajada hoose.
Waxaa magacaabaya Madaxweeynaha Gudoomiyaha Garsoorka ee Maxkamada sare oo ah ta ugu sareeysa, waxaana ansixiya Golaha Baarlamaanka.
Calanka Dawlad Goboleedka
Midabka Calanka wuxuu ka kooban yahaysaddexmidabookalaah Cagaar, cadaan iyo buluug geeska bidix kuleh xidig 5 geesood ah.
Saddexdan midab ayaa kan dhexda kujira uu yahay midab buluuga geeskabidixkuleh xidig kaasi oo ah Calanka Jamhuuriyada Faderalka Soomaaliya, midabka ugu sareeya ooah midabka doogaah waxuu tilmaamayaa barwaaqada Deegaanka Jubbaland, midabka ugu hooseeyo ooah midabka cadwaxaaweeye cadaalad iyonabadgalyada.
Astaanta Dawlad Goboleedka
Astaanta labada dhinac waxaa kaga dhegan Laba Fool Maroodi, waxay dhexda ku leedahay Calanka Dawlad Goboleedka
MagacaDhulkaJubba ma’ahamid dhawaan la baxshay eewaamid taariikh fog, waxaana laysku yidhaahdaa saddexda Goboleekalaah Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe, iyoGedo. Magacu wuxuu kasoojeedaa wabiga Jubbaeemara saddexda Gobol, kanasoo bilaabma Degmada Doolow eeGonolkaGedo, kuna dhamaada tuulada Goobweyn ee duleedka Magaalada Kismaayo.
BU’AALE waamagaalo madaxda Dowlad Goboleeeka Jubbaland
KISMAAYO waa magaal xeebeed ganacsi leh [mb1] Dekad caalami ah, waana magaalo madaxda Gobolka Jubbada Hoose ee Dawlad Goboleedka Jubbaland, waxaayna Magaalada Muqdisho u jirtaa 528km. Magaalada ayaa ah xudun dhaqaale iyo mid dalxiis labada
Juqraafi ahaan wuxuu ku fadhiyaa dhul aad u baaxad weeyn, wuxuuna dhacaa Koonfurta Dalka Soomaaliya. Bedka dhulkeedu waxaa lagu qiyaasaa dhul baaxadiisu dhan tahay 87,000 Km2, una dhaxeeya 2°K - 2°W Loolka iyo 41° – 52°B Dhigaha.
Dawladaha dariska ee ay Jubbaland xadka la wadaagto, dhinaca galbeed waxaa deris kala ah dalka Ethiopia, Dhinaca koonfur waxaa deris kala ah dalka Kenya.Dalka gudihiisa wuxuu xad la leeyahay, Waqooyi waxaa kaga beegan Gobolada Bay, Bakool iyo Shabeelada hoose ee jamhuuriyadda Federalka Soomaaliya. Dhanka bari waxaa ka saran Badweynta hindiya.
Dowlad goboleedka Jubbaland waxaa uu ka kooban yahay oo hoosyimaada Saddex Gobol, 15 degmo iyo tuulooyin aad u fara badan. Gobolada waxay kala yihiin Jubbada hoose oo 5 degmo ah, Jubbada dhexe oo 4 degmo ah iyo Gedo oo 6 degmo ah.
Cimilada Jubbaland waa kulayl, Celceliska Cimilada waxay u dhaxaysaa 27 C ilaa 40C. Deegaanku wuxuu isugu jiraa dhul cimiladiisu caadi tahay iyo mid kulul, intiisa badan waa dhul aad u siman marka laga reebo dooxooyinka, webiyada iyo buuraleyda. Dhulka wuxuu hodan ku yahay dhul xoola daaqeen, sidoo kale dhul howd jiq ah oo ay dhirtu ku badan tahay kuna nool yihiin duurjoog fara badan.
1. Gu’ (Seerma-Waydo, Dirir, Karan)
2. Dayr (Kaat, Daaf, Dambarsam)
3. Jiilaal (Lixkor, Dirir, Todon)
4. Xagaa (Xays, Karan, Maalmodoone)
Roobabka Deegaanka waxay kala da’aan labada xilli ee Gu’ga iyo Deynta oo inta badan ku kala aaddan bilaha Guga (Seerma-Waydo, Dirir, Karan) ama (Abriil-Maajo) iyo bilaha Deyr (Kaat, Daaf, Dambarsam) ama (Oktoobar-Nofember). Sinaanta dhulka marka laga eego dhanka badda wuxuu u dhaxeeyaa 3000-5000m. Qiyaasta roobka ka da’a Gobolada qaar waxaa lagu qiyaasay 300-500mm sanadkii halka qaarna u dhaxeeyaan 150-1000 mm sanadkiiba. TiradaDadka
Dowlad Goboleedka Jubbaland tirada dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa ugu yaraan, in uu yahay 1,600,000 oo qof.
Dowlad goboleedka Jubbaland afka lagaga hadlo waa hooyo oo ah Af-Soomaali, waxaa kale oo soo raaca Carabiga, English iyo Sawaaxili.
Dowlad Goboleedka Jubbaland diintoodu waa Islaamka, Sunni ah. Mad-habtoodu waa Shaafici.
02da April/3da Apriyo 15 May maalmaha ciida ah maalmaha inrernetional ka ah
DHAQAALAHA Dowlad Goboleedka Jubbaland
Dhinaca dhaqaalaha, deegaanka Dowlad goboleedka Jubbaland wuxuu ka mid yahay deegaanada ugu hodansan dhulka Soomaaliya. Guud ahaan xoolaha laga dhaqdo waxay isugu jiraan Geela, Lo’da, iyo Adhiga. Xoolaha nool tirada ugu badan dalkan Soomaaliya, ayaa ku dhaqan Dowlad Goboleedka Jubbaland.Bulshada ku nool badankood waxay noloshoodu inta badan ku tiirsan tahay, ama aas-aasiga u ah dhaqashada xoolaha nool iyo wax-soo-saarkooda.
Jubbaland wuxuu leeyahay dhul aad u ballaadhan oo ku habboon ama u diyaarsan beerashada, hese yeeshee waxa laga beertaa dhul aad u yar. Xaaladda dabeecad-beereedka waa mid oggolaanaya in laga beero noocyo kala duwan oo ah dalag aad u fara badan oo kubixi kara roob-xilayeedka ama waraab caadi ah. Dawladii Kacaanka Maxamed Siyaad Bare
Waxaa ka howl gali jiray Mashruucii Sonkorta mareerey ,Mashrucii Bariiska Mugambow iyo muuri Baardheere.
Dawlad Gonoleedka Jubbalanad iyo Ganacsatadaba, waxaa looga fadhiyaa sidii ay u maal gashan lahaayeen meelaha ugu haboon dhulbeereedka, uguna istiraajiyeysan sida Tuulada Yoontooy oo qiyaastii 25 Km dhinaca Waqooyi Bari uga began magaalada Kismaayo. Marka loo eego sida ay Tuuladu u saaran tahay Wabiga wey ka istaraatiijisan tahay dhanka Beeraha deeganada kale wallow ay jiraan Tuulooyin kale oo lamid ah sida deegaanka Sanguuni, Fagaan ilaa mashruuciibariiska ee Mugaambow.
Badda iyo Dalxiiska
Jubbaland wuxuu leeyahay bad aad hodan u ah kheyraadkuna ku badan yahay. Waxa uu ilaah nasiib u siiyay xeeb dheer oo xariirisa wadamada East africa waxaana ku yaalo jaziirado farabadan oo ku wacan dalxiiska ,dalxiisayashuna aay aad u jecel yihiin dakhliga gobolka jubbada hoose ayaa lagu qiyaasaa in uu kaafin karo haddii si fiican loo maamulo Soomaalioodhan. Dhererka xeebta Dowlad goboleedka Jubbaland waxaa lagu qiyaasaa dhererkeeda ugu yaraan 530 KM.
Dalxiiska Gobolada Jubbada Hoose dowladii kacaanka ee soomaliya ka soo gali jirtay dakhliga dowlada 20%, ma ahan mid ay dowladu ka heli jirtay Gobolada kale ee dalka marka loo eego budget -ka wasaaradii qorsheynta qaranka.
Dhaqqlahaasi ayaa waxaa soo xareyn jiray inta badan wasaarada dalxiiska oo iyadu sameysay Mashruucii dooxada Jubba oo mashaariicda dhaqaale ee laga heli jiray Gobolka jubbada hoose, inkasta oo ay ka qaxeen duurjoogtii quruxda badneyd ee saldhiga u aheyd dalxiisaka Goboladda Jubbooyinka.
Magaalada Kismaayo haddii wi fiican looga shaqeeyo waa meel ku haboon in loo tamashle tago heerkeeda dalxiisnimana aad u sarreeyo. Waxa aan lagula tartamayn magaalada Kismaayo goobaheeda dabaasha oo dhinaca ku ahaya meelaha laga ugaadhsado, xoolaha kayma galeenka ah. Dawlad Goboleedga Jubba iyo ganacsatada waxaa looga fadhiyaa maal-gashi dhismo Hudheello, Guryaha raaxada iyo tuulooyin dalxiis kuwaaso laga dhisaayo Jaziiradaha.
Jaziiradaha Ku Haboon Kaluumaysiga iyo Dalxiiska
Jaziirada waxa ay leeyihiin xeebo aad u fiican oo ku wanaagsan dabaasha, dadka degana waxay noloshoodu ku tiirsan Tahay kheeyraadka bada siiba kaluumaysiga iyo libaax badeedka. Qormadan hoose waxaan ku soo koobayaa fogaanta ay u jiraan kismaauo, tirada dadka ku nool iyo dhismayaasha.
Sidoo kale gambalyuu (Gabalyub), waxay ka mid Tahay meelaha aadka ay ugi badan Tahay Aargoosatada.
Waxaan isleeyahay Maamulka Jubba iyo ganacsatada jaziiradahaas inay ka hirgeliyaan meelo loo dabaal tago waqtiyadada fasaxa, halkaas oo ay ka dhacayso neecaw qabow oo uu jeclaysanaayo jidhkaagu, waana goob aad ugu fiican dalxiiska iyo nasashada. Waxa aad ilaabaysaa marka aad tagto xeebta jaziiradahan dhamaan wixii wer-wer aduunyo ee kugu jiray oo dhan waxanad noqonaysaa qof dareemay in uu yimi deegaan kale.
Xeebahan jaziiradaha waxay leeyihiin dhir badan oo aad hadhsan karto, oo aad ku sugi karto inta ay kala degayso mawjadaha badda. Waxaan dhihi karaa mustaqbalka waa jaziiradaha aduunka ugu quruxda badan ee loo soo dalxistago, hadii loo helo maamul wanaagsan.
Wax soo saarka kalluunka ee adduunku si aad ah ayuu u kordhay kontonki sano ee u dambeysay, sannadkii waxaa la soo saaraa wax ka badan 100 milyan oo tan. Korodhka intaas le’eg waxa uu ku yimid horumarka laga sameeyey dhinacyada farsamada iyo aqoonta kalluumeysiga.
Shaqo ahaan kalluumeysiga waxa ku hawlan qiyaas 20 milyan oo qof, iyada oo tiro intaas le’eg ay ka xoogsadaan warshadaha u adeega kalluumeysiga, sida kuwa doonyaha iyo maraakiibta dhisa, kuwa habeeya iyo kuwa qalabka kale sameeya.
Cunista kalluunka aad ayaa loogu kàla geddisan yahay. Arrintani waxa laga yaabaa in ay in badan ku xiran tahay dhaqanka, dakhliga, diinta iyo helitaanka ama waayitaanka kalluunka. Wadammada koonfurta Ameerika waxa la doorbidaa hilibka, halka Bariga fog kalluunku uu muhiim ka yahay.
Magacyada Kalluunka Jubbaland
Tiraaa noocyada Jubbaland laga helee aad bey u badan tahay, hase yeeshee waxa dhacda in ilaa toban kalluun hal magac ka dhexeeyo. Qaar ka mid ah magacyada Kaluunka Jubbaland waxaa kala yihiin:
Fuluus, Taada, Mkidhi, Mutumbu, Dagaa, Ubabi, Nuufi, Fumme, Boono, Taasi, Imkooma, Kuuku Takaa, Kisumba,Tanguijaafa, Borasimbo, Mkidhi Kaawe, Ki-oofa, Kungu-sabaana, Sulsuul, Majinos Nkeeko, Ma-una tumbaku, Kitaara, Kulunguwe, Kuuju Kulunguwe, Ta-ii, Ibaawa, Gonna, Fubbe-fubbe, Linga Kooko, Tanda kole, Nguru, Kibooma Nguru, Kiboma mjana, Ki-uufa, lyedi, Kooko Ikuuji Kungu Baafa Yambeyni Kaws Shoogo Boonno Khonday Nguru, Nrili limbe-iimbe Seese lisi Nabraan Papang Papanki Mbeeya Khumi Sumbguwe, Yaman gofe, Shateedi, Yaheera, Guguye.
Dugsiyada hoose ayaa lagu qiyaasaa wax ka badan 50, iyo tirooyin badan oo ah Dugsiyada, halka ay tiradoodu badnayn Dugsiyada sare. Waxbarshada sare ayaa waxaa ka jira Jasmacada Kismaayo, iyo kuliyad laga hirgelinayo degmada Baardheere
Dhinaca telefoonada, magaalooyinka waxaa ka jira laynka telefoonada guryaha/xafiisyada (landline) iyo telefoonka gacanta (mobile). Guud ahaan inta badan waxaa ka hirgalay adeegga mobilka.
Xagga korontada, magaalooyinka waxaa ka jira adeega xagga korontada oo wanaagsan. Meelaha ugu faraha badan waxay korontada helaan ugu yarna 6-10 saac maalintii kuwaasoo lagu rakibay janareetaro.
Jubba waxaa ka jira wado laami ah oo isku xidha [mb2] Kismaayo iyo Jilib una baahan dayactir, inta kale wadooyinka ka jiraa waa jid cade. Masaafada ay isu jiraan Kismayo Jamaame waa (52 km), Jilib (97 km) iyo Afmadow (120 km)
Dawlad Gonoleedka Jubbaland waxaa dhex mara webiga Jubba, wuxuu ka soo rogmadaa dalalka ltoobiya iyo Kiinya, Jubbaland wuxuu ka soo galaa Magaalada Doolow. Dhererka Webi Jubba, marka laga soo tiriyo Doolow waxaa weeye 800km, marka laga soo tiriyo bilowga Webiga halka uu ka yimaadana waxaa weeye 1306km.
Webiga Jubba oo Sannadkii soo saara biyo gaadhaya 6 Billion (metric ton), waxaa ku dhaqma xoolo, duur-joog iyo beero nooc walba lehna ay bixi karaan. Badweeynta Hindiya wuxuu kaga daraa tuulada Goobweeyn ee duleedka Kismaayo, qiyaastiina u jirta 15Km
Jubbaland waxaa ku badan yahay kaymo laga helo dhir iyo xayawaano kala nooc ah. Dhulka keymaha iyo howdka oo ay dhirtu ku badan tahay ayaa ku dherersan xeebaha Badweynta Hindiya, iyo koonfurta, taas oo ay ugu wacan tahay roobka ka da’a meelahaas oo ka badan kan ka da’a dhulka intiisa kale.
Kaymahaasi waa aasaaska nolosha xayawaanka duur joogta ah sida Lo’-gisida, libaax, haramcad, shabeel, dhurwaa, dameer-farowga, iyo kuwo kale oo aad u badan. Waxa xusid mudan in khayraadka kaymaha ee deegaanku yihiin daaqsinta xoolaha nool, tamarta dhuxusha, qalabka dhismaha, dawo-dhaqameedka, iyo noocyo badan oo kala duwan.
Dawlada Goboleedka Jubbaland waxaa ku yaala Garoon Caalami ah oo ay diyaaradaha nooc kasta fadhiisan karaan waxa ka mid ah garoonka diyaaradaha Kismaayo. Gobolada iyo Degmooyinka ayaa iyagu leh Garoomo ku meel gaadh ah.
Jubbaland waxay leedahay furdada (Dekaddda) saddexaad ee dalka Soomaaliya ugu weyn oo Kismaayo ku taaliyoDekado dabiici ahoo ay kamid yihiin Kudhaa, Buurgaabo iyo Raaskaambooni.
Dawlad Goboleedka Jubbaland wuxuu ilaahay ku maneeystay kheyraad dabiici ah kuwaasoo isugu jira Macdano iyo kheyraad kale oo badan sida saliida caydhiin, waxa ku yaal dhul caan ku ah kayd aad u wayn oo macaadin kala duwan.
Macdanahaas faraha badan oo aan cidi wali ka faa’iideysan. Sababtoo ah macdantaas waxay u baahantahay maaliyan ama lacag fara badan iyo qalab casri ah iyo weliba dad aqoon iyo xirfad u leh macdanta.Jubbooyinka waa dhul ballaaran, waana dhul weli ugub si waynna loogu han wayn yahay inuu ka deeq karo kaydad macdaneed iyo mid saliidba. Noocyada macdanta ee laga helo juubaland waxaa ka mid ah birta qiimaha badan ee loo yaqaano Titanium.
Agagaarka Kismaayo (Gobweyn) waxaa laga helay kayd ah macdanta TITANIUM. Macdankaasu wuxuu Ia socdaa ciidda madow oo ku fidsan xeebta ku dhow meesha uu badda ka galo webiga Jubba. Kaydkaas qiimayntiisii iyo wixii tallaabooyin ah dib looga qaadi lahaa sidii looga faa’iideysan lahaa, waxaa gacanta ku haya xiligii Dawladii Siyyad Bare Qarammada Midoobay oo qabtay shaqada ku saabsan kaydkaas baariddiisa.
khayraadka shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah waxaa ilaa hadda shirkado kaladuwan ay daraasado ka sameeyeen kaydka loo yaqaan Dooxada Jubbaland gaar ahaan dhanka badda. Batroolku waxa weeye saliidda dhulka laga qodo oo keenta awoodda ay ku shaqeeyaan gaadiidka, dayuuraduhu, maraakiibta badankoodu iyo makiinadaha awooddada danabka sameeya.
Goboladani waxay lahaan jireen warshado sida:-
Warshaddii Hilibka, Warshadii Badarka, Warshaddii Kaartoonka, Warshaddii Sokorta ee Mareerey, warshaddii Hargaha iyo saamaha, Warshada Sibirka (Shamiindada) ee laga hirgelinayey Degmada Baardheere. Waxaan qormada hoose ku soo koobayaa warbixintii Wasaaradii Warshadah 1989kii.
Warshadda Sonkorta Mareerey (Jubbaland State)
Warshada waxay ku taalay Tuulada Mareerey ee Gobalka J/Dhexe, degmada Jilib Cinwaankeeduna waxa uu ahaa P.O.BOX 1774 Mareerey, kana tirsan Maamul Goboleedka Jubbaland ee dalka soomaaliya.
Waxaan ka fogeyn oo ka xiga dhanka Kismaayo Baar-sanguuni oo ah halka uu maro xariikha dhul baraha aduunka, iyo dhasheeg waamo oo ah halka uu ku faafo Wabiga Jubba, kagana daro Badweynta Hindiya Tuulada Goobweeyn.
Warshada dhismaheeda waxaa la bilaabay sanadkii 1976, wuxuuna dhamaaday 1980, waqtigaas oo ay wax soo saar bilowday.
Hantida guud ee gashay mashruuca waxay dhanayd USD 210 million oo ay ka mid aheyd hantida socodsiinta (working capital) sh,so, 2,483,719 ,000 iyadoo rateka dolarku ahaa xiligaas (USD 1 = 270/= )
Dhismaha warshadda waxaa iska kaashaday dawladda soomaaliya, sanduuqa abu-dabay iyo OPEG. Qandaraaska dhismaha hawlaha kala duwan waxaa fuliyay dhawr shirkadood oo Ingiriis ah kala ahaa Booker, Wimpy iyo Mowlen.
Warshaddu waxay ku shaqaynasay in kayar, muggeeda wax soo saar, waxayna sababtu aheyd beerahii qasabka oo ka yaraa qiyaasta intii laga rabay oo aheyd 8,000 hectars, waxaana la beeray oo kaliya ilaa 5,230 hectares waxaana daahiyay lacag la’aan, taas oo ay joojiyeen lacagihii laga sugayay sanduuqa abudabay, hase yeeshee, dawladdii kacaanka ee markaas jirtay waxay ku dadaalaysay inay dhamaystirto mashruuca.
2. Mugga wax soo saarka
Awoodda mugga wax soo saarka warshadu waxay dhaneyd 67,000 tonnes sanadkii, waa marka ay, shaqayso saddex kaltan 24 saacba, hase yeeshee , sidaan kor ku xusay warshaddu kuma shaqaynin muggeeda oo buuxa, taas oo ay sabab u ahayd dhul-beereedka oo aan dhamaystirnayn. 1988 warshaddu waxay muggeeda ka isticmanshay 33,959 tones oo sonkor ah iyo 15,435 tones oo molasses ah, una dhiganta 51% ee sonkorta, molasseska dibadda ayaa loo dhoofin jiray.
3). Alaabta ceeydhiin iyo suug-geynta
Qasabka ay warshaddu ku shaqayso waxa lag a beeraa agagaarka warshadda inkasta oo aan la gasdhsiin qiyaastii dhulkii loogu talagay in la beero.
4. Xaaladda dhaqaale
Xaalada dhaqaale ee warshadu sanadkii 1988 aad ayay u fiicnayd iyadoo isticmaalka mugeedu ahaa 51% ayay muujisay faa’iido dhan SO,SHs, 767,017,000 iibka.
warshadda ee sanadka 1988 wuxuu ahaa sida soo socota:-
Tirada guud ee shaqaalaha Mareerey waxay dhanaayeen 2090 soomaali ah iyo 14 ajaanib ah oo isugu jira aqoon-yahano, xirfadlayaal, Caawiyayaal iyo Adeegayaal waxaana Gudoomiye ka ah Sareeya Gaas Ciidamada ah. Shaqaalaha Mreerey waxay u kala baxaan sidaan:-
1. Warshaddu waxay u baahaneyd maal gelin, si loo dhamaystiro horumarinta beeraha
2. Lacagta adag oo loogu baahi qabay khuburada iyo shay-kabka oo ciriir ahaa WARSHADDA HILIBKA KISMAAYO
Warshaddaan waxay ku taal Gobolka Jubadda Hoose degmada Kismaayo, cinwaankeeduna wuxuu ahaa P.O.BOX 6274 Tel. 2074, kismaayo.
Warshaddaan waxaan la dhisay sanadkii 1969 vvaxaana lagu dhisay dayn laga helay dalka midawga sofiyeeti, hantida guud ee gashay waxay dhanayd SH,SO, 169 9481,831 oo dhamaan hantida ma guurtada ah, sanadihii dambena weey xidhantay.
Warshada waxa ugu weeyn ee ay la fadhiisatay waxay aheyd suuq la’aan, maadaamaa ay suuqyada adduunku tartan yihiin, waxaana jiray wada hadalo ay la yeelatay dawladdo iyo hay’addo caalami ah sida dawladda Masar, hay’adda Qaxoo-tiga ee UNHCR iyo FAO , hase yeeshee, wax natiijo ah lagama gaadhin, waxaa lagu dadaalay in loo helo suuq, waxaa jiray wada hadalo u socda warshadda, iyo dawladdo iyo hay’addo caalami ah oo kale.
2. Mugga wax soo saarka.
Mugga guud ee wax soo saarka warshaddu waa 6,000 tons oo hilib qasabadaysan ah sanadkii, waxaana loogu tala galay inay qasho sanadkii 60,000 neef ilaa 65000 neef oo Lo’ ah.
Al aabta ceedhiin ee warshadda waxay 100% ku salaysan tahay xoolaha nool ee dalkeena. Korontadana waxay ka heli jirtay matoor ay laheyd oo ay ka isticmaashay 450 Kwatt sanadka oo dhan.
Tirrada guud ee shaqaalaha warshaddu waxay dhan yihiin 60 qof oo dhamaan soomaali ah oo isugu jira aqoon-yahano, xirfadlayaal, caawiyeyaal iyo adeegayaal, waxayna u kala baxaan sidan:
WARSHADDA HARGAHA KISMAAYO
Warshaddaan waxay ku taal Gobolka Jubbada hoose degmada Kismaayo, cinwaankeeduna waa P.O.BoX 65 Tel: 2167 Kismaayoo
Warshadda waxaa la dhisay sanadkii 1977, waxaana dhismaheeda iska kaashaday Wasaaradda Warshadaha iyo Wasaaradda Hawla ha guud, hantida guud ee gashay waxay dhaneyd 26,854,018/= oo u kala baxa So,SHs, 16,179,998 hantida maguurtada ah iyo So,Shs, 10,674,021 oo ah hantida socodsiinta, ujeedada loo dhisay warshaddu waxay ahayd:
1. Inay horumariso farsamada hargaha noocyo kala duwana soo saarto, si ay qiimaheed.a kar ugu qaado 2. Inay hagaajiso hargaha qalalan kuwaas oo iyagoo tayo xun dibadda loo dhoofin jiray, 3. Inay dalka soo geliso lacag adag.
2. Mugga wax soo saarka:-
Awoodda wax soo saarka warshadda waxaa loogu tala galay inay soo saarta 500 harag maalintii oo Lo’ ah hadii ay ku shaqeyso muggeeda buuxa, taas oo sanadkii loo qorsheeyay 86,400 harag. Sanadkii 1988 wax soo saarka warshaddu wuxuu ahaa 30,419 harag, taas oo u dhiganta 35% muggeeda guud , iyadaa maalmaha shaqadu ahaayeen 288 shaqo ka maqnaanshuhuna 77 maalmood.
Hanti- gelinta: warshadda waxaa bixiyay Dawladda Soomaalida waxaana iska kaashaday, Wasaaradda Warshadaha iyo Wasaaradda hawlaha guud, warshadu waxay hoos tagi jirtay wakaaladda Hargaha Soomaaliyeed oo iibgeysa hargaha ay farsamayso , una soo gada waxyaabaha ay u baahan tahay, sidaasawgeed, warshaddu lama socon kharashka alaabta dayactirka ee u gudba, wax soo saarkeedana waxaa lagu isticmaali jiray wadanka gudihiisa iyo dibadiisaba.
4. Xaaladda dhaqaale ee Warshadda :-
Wax soo saarka warshadda sanadkaan 1988 aad buu u fiicanaa marka loo fiiriya sanadihii ka horeeyey , taas oo aanay muujin Faa’iid marka laga reebo sanndkii 1987 oo ay faa’iiday 2,870,959/=. 1988 warshaddu waxay muujisay faa’iido dhan 16,777,440/= oo u dhiganta 33.5% ee gadashadda (sales) ama 62.5% ee Maalgelinta (investment) waxaa kale oo ay warshaddu muujisay qiimo-koror dhan So,SHs, 24,926s262 oo u dhiganta 50%/ ee gadashada ama 93% ee maalgelinta.
Sannadka 1988 korontadda warshaddu isticmaashay waxay dhanneyd 32, 373KW, xaaladeeda dhaqaalana waxay ahayd sidan:-.
Tirada shaqaalaha warshaddu waxay ahaayeen 73 qof oo dhamaan soomaali oo u kala baxa aqoon-yahano, xirfadlayaal, caawiyayaal, iyo adeegayaal, waxayna u kala baxaan sidaan:-
Warshaddu iyadoo ka cabanaysay helitaanka hargaha ayaa haddana, waxaa ugu darsamay qalab dayactir la’aan. Tababarka shaqaalaha oo hooseeyay una baahan in kor loo qaadoo
Warshaddii Badarka ee Kismaayo
1. HORDHAC :-
Warshadda waxay ku taal Gobolka J/Hoose degmada kismaayo, cinwaankeedunn waa P.O.BOX 19 Kismaayo.
Warshaddan waxay ka mid aheyd warshaddo badar oo dhawr ah oo la dhisay sanadkii 1974, kuwaas oo uu maalgeliyay Bangiga Horumarinta Soomaaliyeed. Kharashka galayna wuxuu dhanaa So,SHs , 4,261,979 oo dhamaan hantida maguurtada ah hantida socodsiinta waxay ka heshay wakaaladda horumarint a Beer aha Soomaaliyeed (ADC) oo ay warshaddu hoos tagi jirtay.
3. Mugga wax soo saarka
Mugga wax soo saarka warshaddu wuxuu dhanaa 72,000 quintals marka ay muggeeda oo buuxa ku Shaqayso, hase yeeshee sanadkii 1988 warshadu waxba ma soo saarin sababtuna waxay aheyd qalabkii wararshadda oo gaboobay, una baahnaa dayactir. Midho la’aan heshay warshadda, waayo warshaddu ma laheyn hantida socodsiinta ah, oo ay maamulka warshaddu u madax banaan yihiin, Lacagta adag oo cidhiidhi aheyd si warshadda u hesho qalab dayactir.
Tirada shaqaalaha joogay warshadda waxay dhamaayeen 8 qof oo soomaali ah oo isugu jira xirfadlayaal, caawiyayaal iyo adeegayaal , waxaana madax ka ah J /LLe haysta shahaadada Dugsiga Sare. Waxayna u kala baxaan sidan :-
Marxaladihii ay soo martay Maamulka Jubbaland
Biloowgii iyo heerarkii uusoomarayiyowixii la soo qabtay(warbixin Kooban):
Waxaa deegaanka Jubbaland laga soo ururiyay ciidamo tirobadan, loona furay tabar ay ka saaciday dawladaKenya.
Waxaa tababar aqoon kororsi ah loo sammeeyay saraakiil sarsare oo ka tirsanaa ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed.
Waxaa la hawlgaliyey ciidankii xoreeynayey deegaanka Jubbaland iyagoou dhameeystiran yihiin qalabkoodii, xoreeyeena intabadan. Waxaa loo magacaabay maamulo deegaanadii la xoreeyey, lanasiiyey tababaro.
Waxaa la abaabulay ururadabulshada, odayaal dhaqameedyo, culimaa’udiin iyoqurba joogta kasoojeeda Jubbooyinka iwm.
Shirar tirobadanoo dib u heshiisiin ah oo loo qabtay beelaha dega Gobolada Jubbooyinka[mb3] , laguna qabtay dalka gudihiisa, iyo dibadiisa.
Deegaanada la xoreeyay iyo xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya ku yaalwaxaaloodiray wafuud.
Waxaa talolala wadaagay iyowadatashi xildhibaanada Dawladii kumeel gaadhka aheydeekasoojeeda Gobolada Jubooyinka.
Markii ay soo dhamaadeen shirarkii kasocday Doolow iyo Dhoobleey waxaa wada tashi loogula noqday dadkii ku noolaa deegaankaa, si loola socodsiiyo wixii ka soo baxay shirarkaas, loona soo ururiyo fikradahooda iyo sida ay u arkaan barnaamijka Dowlad goboleedka Jubbaland.
· Waxaa waxaa cod buuxa ku ansixiyey Dastuurka Ergo gaadhaysa 870, ka kala yimid Gobolada Jubbooyinka 02/apr/2013
· Waxaa lagataagay Calankii Jubbaland 4-Apriil-20013 oo Maalin Khamiisa , Saacadu Markaay aheyd 3:17 pm
Marxaladaha aysoomaratay Jubbaland ayaa ahaa midhoosta laga bilaabay dhismihiisa, socdayna muddo dheer
Muddada uu socdayda oo ahaa wakhti dheer, inkabadansaddexsano.
Dhismaha Dawlada Goboleedka wuxuu waafaqsan yahayAxdiga DFKMG ee Soomaaliya
Doonista iyo rabitaanka bulshada Jubbooyinka ayuuku saleeysan yahay
Waxaa dagaal lagaga soo horjeedo lalagalaykooxa xagjirka aheeAlshabaab
Waxaa labaadigoobay deganaansho iyonabadkuwada noolaansho kacurataguudahaan Soomaaliya gaarahaanaJubbaland
Wuxuu tusaaleuyahaynabadiyo iskaashi ka hirgala Dawladaha dariska iyo guud ahaan dunida oo dhan
Injeer Maxammed Abdi Barkhadle (Tiyeeklow)
6 Responses for “Taariikhda ilaha dhaqaale ee Jubaland , Dowlada Jubaland ee hada Curatay Marxaladahii ay soo martay( Warbixin Cilmiyeed Muhiim ah oo xiiso leh ka bogo (By Enjineer Tiyeeklow)”
afmadow says:	10/10/2013 at 1:42 pm	Waa warbixin qiimo badan, oo xambaarsan aqoon kororsi cilmiyeysan, Waamonews waad mahadsantihiin
suleiman mohamed says:	10/10/2013 at 2:21 pm	waa ku mahadsan yahay Eng Maxamed warbixinta cilmiyeesan oo uu noo soo diyaariyeyuu soo diyaariyey.
waxaa jira dhowr meel oo aan is dhihi wax ka sax sida :
1- map-ka ma ahan kii maamulka juba oo jubada hoose kaliya.
2- kismaayo waxey muqdisho u jirtaa 480Km .
Adam says:	10/10/2013 at 10:53 pm	SU,AAL, maxaa ka dhaqan ama ka nabadgalay warshadahaas mise waa in ground zero laga soo bilaabaa?
ali says:	11/10/2013 at 2:25 pm	Waad Ku mahadsantihiin warbixintan cilmiyeysan ee aad noo soo gudbisan
xildhibaan khalif says:	11/10/2013 at 11:53 pm	Masha allah xaqiiqdi wa warbixiin cilmeyaysan dhabtana ka turjumaysa iyo waliba sida wanagsan e enjineerku inogu balbaldhiyay wax walbo kusabsan jubaland aadban u jacleystay inan inbadan ku noqnoqdo aqriskan warbixiinta ah
hanuuniye says:	12/10/2013 at 1:54 pm	Eng wuu mahadsan yahay,Intan waan wada ogmahay wuxuu na siiyay cabir weyn anigu waxaan xiisaynayaa khayraadkaiyo fursadaha nololeed ee meesha ka jira
1-Eng wabiyadu ma ahan Jubba kaliya waxaa jira DAAWOwaxaa laga yabaa in uu ilaabay
2-Wuxuu ilaabay oo kale ilaha dhaqaalaha ee jubaland ee maamulku manshuur ka heli karo kolba hadduu ka hadlay airport ka iyo dekedda waxaa ila qumanayd in uu ku daro border crossing sida Dhoobley Ceelwaaq B/xaawo iyo Dolow,warbixintu dadkii ku manaafacaadsan lahaa wali maysan dhalan waxaan aragnaa dad isku hayshaysta wax aan micnobadan lahayn cadaaladdaro la kalatabanayo.Anigu waxaan lafakar ahay sheekh maxamed shakuul markuu lahaa Jubaland banaanka ayay ka macaan tahay iyadoo khayraadkaas la haysto ayaa dadka jubaland ay yihiin dadka ugu faqrisan somaliya waxaana ka badbaaday oo kaliya b/xaawo oo furin ah maalina dagaalka dhaco maalina nabad ah inta kale idinkooaanay caadifad idin qaadin bal soo arka,waxaan ka galay dhobley afmadowayaan tagay kismayo ayaan tagay j/dhexema tagin gedo waxaan ka tagay b/xaawo iyo dolow kismayo colaasha ayaa ku xanuunaysa illahay waxaan dadka uga baryayaa tubta toosan iyowanaagga inuu waafajiyo
Bogsiye: Si qaab daran baa loo maamulay! Wasiirka arimaha gudaha waxaa istaahilay Macalin max,ed. Madaxweyne...
godey: soodhawoow mudane md axmed maxamed islaan adigoo kumahadsan inaad magacowday qaar kamid ah golahii fulinta ee...
samatar: jijiga waxa kusugan .siilaanyo faroole,axmed madoobe ismaaciil cumar geele,indho sheel,jijiga waa hooyada...
Sacdi.: Waa talaabo horay loo qaaday,waana soo dhoweyneynaa.
hanuuniye: KKKKK@WIIL GEDO ma u daba marnaa Kimsaayo marka ay ka soo tagaan kkkkkkk?oo Gedo sow horumarka uma...
Wadatashiyadii dhameystirka Maamulka Jubaland oo heer gabo gabo marayo(Warbixin)
Daawo: Falanqeynta kalsooni kala noqoshada xukuumadii hore ee Somaliya